Ireo mpisava lalana velona momba ny fizahantany dia ekena amin'ny fandraisany anjara tamin'ny indostria
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Seychelles Madagascar Malgache » Ireo mpisava lalana velona momba ny fizahantany dia ekena amin'ny fandraisany anjara tamin'ny indostria
Awards • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovaom-panjakana • Hospitality Industry • Vaovao • People • Seychelles Madagascar Malgache • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia
Mpisava lalana fizahantany Seychelles
Seychelles dia nanangana ny hetsika ho an'ny Fetiben'ny fizahan-tany 2021 tamin'ny andron'ny fizahan-tany manerantany tamin'ny 27 septambra tamin'ny fankasitrahana mpisava lalana 10 tamin'ny fandraisany anjara tamin'ny indostrian'ny fizahan-tany eo an-toerana tamin'ny lanonana fohy natao tao amin'ny Seychelles Tourism Academy (STA) ao La Misère.
Ny minisitry ny fizahantany Sylvestre Radegonde dia nanambara ireo anarana ireo tamin'ny hetsika natao tao amin'ny Pioneer Park.
Ny fanomezam-boninahitra dia naloa tamin'izay rehetra nandray anjara lehibe tamin'ny sehatry ny fizahan-tany Seychelles, nandinika fotoana mangina ho an'ireo izay tsy eto intsony.
Nasongadin'ny minisitra fa tokony ho ohatra ho an'ny tanora ireo mpisava lalana omena voninahitra.
Ny toetra amam-panahy ekena tamin'ity taona ity dia Ramatoa Doris Calais, Ramatoa Mary ary Andriamatoa Albert Geers, Ramatoa Gemma Jessie, Ramatoa Jeanne Legge, Andriamatoa Lars-Eric Linblad, Ramatoa Kathleen ary Andriamatoa Michael Mason, Andriamatoa Joseph Monchouguy , Andriamatoa Marcel Moulinie, Ramatoa Jenny Pomeroy, ary Andriamatoa Guy ary Ramatoa Marie-France Savy.
Mampiseho ireo anarana voasokitra amin'ny takelaka aseho ao amin'ny Fizahan-tany Seychelles Pioneer Park, eo am-baravaran'ny Akademia, ny minisitry ny fizahan-tany Sylvestre Radegonde, izay natambatr'ireo olona mendri-piderana na solontenan'izy ireo tamin'io hetsika io dia nilaza fa ho an'ireo olona fizahan-tany voalohany mbola velona dia ankalazaina, ankoatr'ireo izay nandao anay.
“Sambany izao isika manaiky ny olona mbola velona. Mino izahay fa mila manome ny olona ny fankatoavana mandritra ny fahavelomany. Tsara fa fantatr'izy ireo fa ankasitrahana ny fandraisany anjara ", hoy ny minisitra.
Minisitry ny fizahantany Sylvestre Radegonde
Tamin'ny kabary fanokafana nataony dia nanome voninahitra ireo izay nandray anjara lehibe tamin'ny sehatry ny fizahan-tany Seychelles ny minisitra, nandinika fotoana mangina ho an'ireo izay tsy miaraka amintsika intsony.
“Ny hetsika dia fotoana iray hahatsiarovana sy hanomezam-boninahitra ireo mpandika tany Indostrian'ny fizahan-tany Seychelles. Ny tsirairay amin'ny sehatry ny indostria dia mitana andraikitra lehibe. Faly aho fa eto isika androany mahatadidy ireo rehetra izay niasa mafy nanao ilay indostria ankehitriny. Manome voninahitra ny mpisava lalana 10 izahay fa mbola maro hafa no harahina. Ho an'ireo izay eto dia betsaka ny filan'ny nofo tamin'ny zavatra nataonao ho an'ny indostria ary mankasitraka izany izahay ", hoy ny minisitra Radegonde.
Manararaotra ny toerana nanatanterahana ny lanonana nananganana ny fandraisana vahiny sy ny matihanina amin'ny fizahantany amin'ny ho avy, nanamafy ny minisitra fa tokony ho ohatra ho an'ny tanora ireo mpisava lalana omena voninahitra, mampatsiahy azy ireo fa sarotra ny miasa eo amin'ny sehatry ny fizahantany, fa izany amin'ny fanoloran-tena sy ny asa mafy dia tsy misy tsy azo atao. "Ireo olona fantatsika ankehitriny dia tao amin'ny orinasa nandritra ny taona maro, ary ny olona mahalala azy ireo dia nahita ny niandohany - tena kely izy ireo, ary tamin'ny fomba niasan'ny asa mafy nahombiazany tamin'ny toerana misy azy ireo ankehitriny."
Ny fizahantany dia raharahan'ny tsirairay avy amintsika, hoy ny minisitra, izay nanasongadina ny filan'ny fiaraha-miasa ny tsirairay hanondrotra ny fenitry ny serivisy ao amin'ilay toerana haleha. Manameloka ny tranganà halatra sy hetsika nataon'ny mpizahatany tato ho ato dia nangataka tamin'ny besinimaro izy mba hahatsapa ny fihetsik'izy ireo satria misy fiatraikany amin'ny endrik'ilay firenena.
2021 no taona fahenina taorian'ny nanekena ireo mpisava lalana fizahantany, fandraisana andraikitra natombok'i Andriamatoa Alain St Ange, minisitry ny fizahantany teo aloha. Nanatrika ny hetsika tao amin'ny STA ny minisitry ny governemanta eo an-toerana sy ny raharaham-pokonolona Ramatoa Rose-Marie Hoareau, minisitra teo aloha tompon'andraikitra amin'ny fizahan-tany Andriamatoa Alain St. Ange sy Ramatoa Simone Marie-Anne de Comarmond, sekretera voalohan'ny fizahan-tany Sherin Francis ary ny talen'ny ny Akademia Fizahan-tany any Seychelles Andriamatoa Terrence Max.
Air Canada manampy fahafaha-manao fanampiny ao Vancouver
Ny vaksiny Rosiana Sputnik V dia nekena ho an'ny fidirana an'i Israely
Spa amerikana roa ao amin'ny Spa 10 ambony indrindra Instagrammable ao amin'ny...
Sidina an-dalamby vaovao eo anelanelan'i Newark Liberty sy Reagan...
Anguilla Fanavaozana Vaovao momba ny Fidirana Fidirana Fidirana Manomboka...